Munhu Mumwe Chete Akafa neChirwere cheCovid-19 kuMatabelaland South neMusi weChipiri
Kubvumbi 21, 2021
Bazi rezvehutano rakazivisa nemusi weChipiri kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 kuMatabeleland South, izvo zvakasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera, hwave pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi mashanu nevana, kana kuti 1,554.
Vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasiyawo vanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvinomwe ane mazana masere nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 37, 875. Vanhu makumi maviri nevanomwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemashanu nemakumi mashanu nevasere kana kuti 35, 058.
Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1, 263. Huwandu uhu hunogona kukwira neChitatu manheru apo hurumende ichazivisa zvayakawana.
Zvichakadaro, vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga hwave zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvisere nemazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe, kana kuti 288, 229. Asi vabayiwa.
Nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa navanachiremba vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu ane mazana manomwe nemakumi manomwe nevasere, kana kuti 36, 778.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru munyaya dzekurwisa chirwere checovid-19 muhurumende dr agness mahomva sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu.
Asi hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi ichishandisa nhomba dzakabva kuChina dzinoti Sinovac neSinopharm, idzo dzisati dzapihwa chitambi neWorld Health Organization kuti dzishandiswe neveruzhinji.
Imwe nhomba yakabva kuIndia uye imwe iri kutarisirwa kubva kuRussia.
Nyanzvi munyaya dzezvehutano uye vakambove mukuru weChitungwiza Hospital varizve munyori wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, Dr Enock Mayida, vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba uye kuramba vachiteerera kurudziro iri kuitwa nebazi rezvehutano kuti chirwere ichi chisadzoke zvine hukasha.
Hurukuro naDr Enoch Mayida